CAT S31, ihe ngosi izizi na IFA 2017 | Gam akporosis
CAT S31, mmetụta mbụ na IFA 2017
CAT bụ a emeputa pụrụ iche na-eweta oyi-ụzọ ọnụ. Ejiri akara ya nwere inwe asambodo ndị agha nke na-ekwe nkwa na ngwaahịa ya ga-anagide nsogbu ọ bụla ma ọ bụ daa, ịbụ ọtụtụ ngwaọrụ dị mma maka ịrụ ọrụ na gburugburu iro ma ọ bụ ịme egwuregwu egwuregwu.
Anyị enyeworị gị nke anyị mbụ mmetụta mgbe nwalere CAT S41, otu n'ime ekwentị ndị nrụpụta gosipụtara n'ime usoro nke IFA na Berlin. Ugbu a bụ oge nke Nwamba S31, nke kachasị decaffeinated nke na-apụta maka oke njide ya na asambodo ndị agha 810G ya.
2 CAT S31 ọrụaka e ji mara
Isi okwu kachasị adọrọ mmasị na ekwentị a bụ nnukwu nguzogide ọnọdụ ọjọọ. ka ịmalite CAT S31 nwere Corning ozodimgba nchedo yana asambodo IP68 nke na-enye ohere ịbanye n'ime mita 1.2 ruo nkeji 35 na-enweghị nsogbu). A ga-agbakwunye nke a asambodo ndị agha 810G nke na-ekwe nkwa iguzogide nnukwu nrụgide, ọnọdụ okpomọkụ na ịma jijiji.
N'ileghachi anya na nhazi nke CAT S31 o doro anya na ọ bụghị ụdị ekwentị. Na nke a, anyị na-ahụ ngwaọrụ enwere ike iji ya rụọ ọrụ na ihuenyo ma ọ bụ nwee ìhè anyanwụ. O nwekwara a programmable bọtịnụ pIji mee ka Push to Talk rụọ ọrụ, ụdị ụdị Walkie-talkie, tọọchị ma ọ bụ zipu ozi mberede iji nye ụfọdụ ihe atụ.
Dị ka ị hụworo, atụmatụ siri ike nke CAT S31 na-enye gị oherejiri ekwentị jiri aka mmiri ma ọ bụ apịtị apịtị ekele igodo roba ndị a kwadebere maka ọrụ a. Ke ofụri ofụri, ọ bụ a ekwentị kpọmkwem iji guzogide otú atụla anya a ebughibu ngwaọrụ ma ọ bụ na ihe mara mma imewe. Ọ bụrụ na ihe ejiri mara CAT S31, ọ bụ maka mgbochi ya, ọ bụghị maka ịma mma ya.
CAT S31 ọrụaka e ji mara
Usoro njikwa Android Nougat 7.1
Ihuenyo 4.7 sentimita asatọ HD na-echebe Gorilla Glass 3
Nhazi Qualcomm Quad-isi 1.3 GHz
Nchekwa 6 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa site na SD
8 Mpx Igwefoto Mpx
Igwefoto ihu 2 Mpx
Njikọ SPA + -LTE pusi 4 - Wi-Fi 5 GHz - Bluetooth 4.2 - SIM abụọ
Atụmatụ ndị ọzọ IP68 Certified / 810G Military Certified / Accelerometer / Gyroscope /
Nyochawa ya, CAT S31 gụnyere etiti mpaghara ahụ nwere atụmatụ nke ga - enyere anyị aka ịntanetị, jiri netwọkụ mmekọrịta na ọbụlagodi igwu egwuregwu na-achọghị nnukwu ibu ọrụ, mana obere ihe ọzọ. O juru m anya ogo gị na ihuenyo Ọ na - enye ụfụ agba dị nkọ ma doo anya, gbakwunye ụfọdụ karịa akụkụ nlele ziri ezi.
Otu nkọwa m masịrị m bụ eziokwu bụ na CAT S31 na-abịa ọkọlọtọ yana gam akporo 7.1 Nougat. Ekwentị nke abụghị teknụzụ dị ịtụnanya mana ọ karịrị karịa mkpa nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ yana mgbakwunye nke ịnwe chassis na-eguzogide ọgwụ na a 4.000 mAh batrị nke ahụ kwere nkwa nnwere onwe dị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA » CAT S31, mmetụta mbụ na IFA 2017
OUKITEL na-anwale ndụ batrị nke OUKITEL K3
Lenovo K8 Plus nwere igwefoto abụọ na batrị 4000 mAh batara na India